बुढा नेताहरुले अब राजनीतिबाट सन्या`स लिनु पर्छ, युवालाई देश चलाउन दिनु पर्छ:गगन थापा(भिडियो सहित) – Namaste Dainik
May 5, 2020 May 5, 2020 NamastedainikLeaveaComment on बुढा नेताहरुले अब राजनीतिबाट सन्या`स लिनु पर्छ, युवालाई देश चलाउन दिनु पर्छ:गगन थापा(भिडियो सहित)
एकाएक के सोच्नु भयो एकातिर अध्यादेश ल्याउनु भयो। अर्कोतिर अरुको पार्टी फुटाउन भाडाका मान्छे प्रयोग गरेर सांसद उठाउने काम गर्न थाल्नु भयो।’उनले अगाडि भने,‘त्यसको प्रभावले उहाँको पार्टी फुट्नेसम्मको अवस्थामा पुग्यो। सांसदहरुले नै पक्ष र विपक्षमा हस्ताक्षर गर्न थाले। यो कसैले निम्त्याएको हो? कुरो प्रष्टै छ। योभन्दा प्रष्ट कुरो के छ?
केही दिनपहिले प्रतिपक्षी दलसहित आम नेपालीले सरकारलाई साथ दिएको स्मरण गर्दै योभन्दा अनुकल अवस्था कहिल्यै नभएको उनले बताए।‘अध्यादेश नल्याउन्जेल सबैले के भनिरहेको थिए भने तपाई हाम्रो अभिभावक हो। हाम्रोसेनापति हो। यो लडाई तपाइले हार्नुभयो भने हामी पनि हार्छौं।सर्वश्व गुमाउँछौं। सबैले भनिरहेको कुरा यहि त थियो। योभन्दा अनुकुलको अवस्था ओलीले खोज्नु भएको चाहि के हो?
सरकारले एउटा कोष बनायो। सबैभन्दापहिले कांग्रेसले ५० लाख बोकेर गयो। यो कांग्रेससँग पैसा धेरै भएर पनि होइन र सरकारसँग कम भएर पनि होइन। सन्देश के दिन खोजिएको हो भने प्रतिपक्ष सरकारसँगै छ।
महा`मा`रीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताका विषयमा समेत प्रक्रियागत छानबिन हुने भन्दै आफूहरु चुप बसेको उनले स्मरण गरे।‘यत्रो ठूलो अनियमितता हुँदा पनि महामारीको बेलामा हामीले खासै बोलेनौं। विषयान्तर गर्नु हुँदैन भन्यौं।’उनले भने,‘हाम्रा यत्रा मान्छे बाहिर छन्।
नेपाल छिर्न पाउने उनीहरुको हक हो। उहाँहरुका लागि तपाइले सिमानाबन्द गर्न पाउदैन। तिनलाई कसरी ल्याउने? ल्याएर कहाँ राख्ने? यो विषयमा त बहसै हुन छोड्यो। सारा देशलाई प्रधानमन्त्रीले अर्कोतिर लग्नुभयो।
यो आचरण र क्षमता भएको नेतृत्वले हामीलाई महासंकटबाट पार लाउँला?उनले प्रश्न गरे।